Xildhibaan Odowaa oo Qoor Qoor ku tilmaamay shaqsi ku fashilmay xaalada Galmudug | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xildhibaan Odowaa oo Qoor Qoor ku tilmaamay shaqsi ku fashilmay...
Xildhibaan Odowaa oo Qoor Qoor ku tilmaamay shaqsi ku fashilmay xaalada Galmudug
Xildhibaan C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa) oo ka mida xildhibnanada Baarlamaankii 10-aad ayaa weerar afka ah ku ekeeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor.
“Madaxweynihii Galmudug na wuxuu Xamar u joogaa inuu Farmaajo kala shaqeeyo muddo kororsi sharci darro ah. Waana sababta markii horeba loo geystay Galmudug” ayuu yiri Xildhibaan Odowaa oo sheegay in Alshabaab ay maalmihii lasoo dhaafay ay degaano ka qabsadeen Galmudug.
Farriintiisa ayuu ku sheegay in Madaxda dowlad dowlad goboleedyada uu Farmaajo dhistay, kuraastana u boobay, ayaa dhowr bilood waxay iska fadhiyaan Xamar, iyagoo aan wax war ah ka heyn dadkooda iyo deegaankooda.
Shabaab waxay qabsadeen dagmada Bacaadweyne oo ahayd magaalo muddo dhan kaligeed difaac ku jirtay, sidoo kale deegaanada Sinadhaqo iyo Labi Dulle oo ku yaalla duleedka koonfureed ee caasimadda Galmudug ee Dhuusmarreeb.” ayuu yiri Xildhibaan Odowaa oo ka hadlay xaaladda Galmudug iyo saameynta Farmaajo
Wuxuu hadalkiisa kusoo xiray: “Farmaajo musiibada uu dalkan u horseeday kuma sinna inuu duminaayo dowladdii federaalka aheyd ee 20 sano lasoo dhisaayay, balse wuxuu sidoo kale duminayaa dowlad goboleedyadii dalka”
Arrintan ayaa u muuqata inay fashilantay dadaalkii lagu doonayey in Qoorqoor uu ka hor yimaado muddo kororsiga Maxamed Farmaajo.
Previous articleDad ku dhintay Hoobiyeyaal lagu garaacay Degmooyinka Warta Nabadda iyo Boondheere oo u dhaw Villa Somaliya
Next articleTurkey oo u yeertay safiirka Sweden kadib hadal uu yiri Wasiirka Difaaca Sweden
Saacadihii ugu dambeeyay waxaa sii xoogaystay hadal haynta cabsida laga qabo banaan-bax ay shalay k baaqeen midiwga musharixiinta in ay qaban doonaan maalinta jimcaha, Waxaa...